Ben & Jerry's Israel kukanganisa kunodhura kambani yevabereki $111 miriyoni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Ben & Jerry's Israel kukanganisa kunodhura kambani yevabereki $111 miriyoni
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Investments • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Ben & Jerry's Israel kukanganisa kunodhura kambani yevabereki $111 miriyoni.
Homwe huru yeNew York retirement homwe, iyo inodyara mari inodarika mazana masere emamiriyoni emadhora muIsrael, yakamboyambira kambani iyi muna Chikunguru kuti kuramba ichi kwaizokuvadza mari yayo muIsrael.
Vermont-based ice-cream hofori Ben & Jerry yakatarisana nekushomeka kwemari nekuramba kwayakaita Israel.
New York State Common Retirement Fund inobvisa equity holdings mukambani yevabereki vaBen & Jerry.
Kuramba uku, boka rinoti, kutyora mitemo yaro yekupokana neBDS (kuramba, kubvisirwa, uye zvirango).
New York State Common Retirement Fund yakazivisa kuti ichabvisa masheya mukati Ben & JerryKambani yevabereki, Unilever PLS, pamusoro pekuita kwefemu mukurwisa-Israel BDS zviitiko.
"Mushure mekuongorora kwakadzama," homwe iyi yakati ichabvisa masheya muUnilever PLS. "Ongororo yedu yezviitwa zvekambani, uye inotsigira Ben & Jerry's, vakawana vachiita mabasa eBDS pasi pemutemo wehomwe yedu yepenjeni," Tom DiNapoli, anoona nezvehomwe yemudyandigere, akadaro nezvechisarudzo chavo chekudambura hukama nehofori yakasununguka yeayisi-cream yeVermont.
Kuramba uku, boka rinoti, kutyora zvirevo zvaro zvinopesana neBDS (kuramba, kudhirowa, uye zvirango).
Homwe huru yeNew York retirement fund, iyo inodyara mari inodarika mazana masere emamiriyoni emadhora muIsrael, yakanga yamboyambira kambani iyi muna Chikunguru kuti kuramba uku kwaizokuvadza mari yayo. Izirayeri.
Kurambana, kwakaona Ben & Jerry kuramba kutengesa aizikirimu mu 'Dzimba Dzakabatwa Palestine' dzeWest Bank neEast Jerusalem, kwakatarisana nekupokana kwakanyanya kubva kune vakawanda veUS pundits uye vemitemo, pamwe nevakuru vakuru veIsrael.
Kuramba kwacho kwakazoitawo chiseko mushure Ben & Jerrymuvambi wekambani Ben Cohen akatarisana nekutanga mwedzi uno nezve sarudzo yenzvimbo dzekuramba, nekambani ichipikisa. Izirayeri, asi kwete nyika yakaita seGeorgia, iyo vatsigiri vebato vakati ine kodzero huru dzekuvhota dzakakurudzirwa nevamiriri veRepublican. Paakabvunzwa kuti nei Georgia isina kurambwa nekambani, Cohen akapindura, "Handizive."
“Nekufunga ikoko, hatifanire kutengesa ice cream chero kupi zvako,” akadaro. Vagadziri vekambani iyi vakazvitsanangura se "maJuda anodada" avo vasingabvumirani nemitemo yeIsrael.
Unilever akadzivirira kuramba kwacho muna Nyamavhuvhu mutsamba yakanyorerwa homwe yekuNew York retirement fund, CEO Alan Jope achiti kambani iyi inoshandisa zviuru muIsrael uye ine mamirioni akaiswa mari ikoko, asi havapindire muzviito zvemabhodhi "akazvimiririra".